Al-Shabaab oo sheegatay weerarka Mandera - BBC Somali
Al-Shabaab oo sheegatay weerarka Mandera
2 Disembar 2014
Image caption Al-shabaab oo weeraray shaqaale jiifa teendhooyinkooda
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka Mandera ee ay ku dhinteen ugu yaraan 36 qof. Weerarka ayaa ka dhacay meel dhagax laga qodo oo ku dhow magaalada Mandera, woqooyi-bari Kenya.
Weerarka ayaa dhacay xalay xilli dambe, waxaana dadkaasi qaar ka mid ah ay sheegayaan in la toogtay qaar kalena qoorta laga gooyay iyaga oo dhex jiifay teendhooyin ku yaala goobtii ay dhagaxa ka qodayeen.
Dhammaan dadka la dilay ayaa ahaa dad aan Muslimiin ahayn, waxaana qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkaas ay booliska u sheegeen in dadkii Muslimiinta ahaa ee goobta ku sugnaa gooni loo bixiyay oo aan la dilin.
Toddobaad ka hor ayaa 28 qof oo aan Soomaali ahayn oo ku safrayay bas waxaa lagu dilay meel ka baxsan magaalada Mandera kaddib markii rag ka tirsan Al-Shabaab ay dhexda u galeen baskaasi oo ku sii jeeday magaalada Nairobi.